विश्वकप पछि आईसीसी वरियता सार्वजनिक, कोहली र बुम्राह टप, को कति नम्बरमा ? – WicketNepal
विश्वकप पछि आईसीसी वरियता सार्वजनिक, कोहली र बुम्राह टप, को कति नम्बरमा ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ असार ३१, मंगलवार १०:३४
प्रतियोगिताकै उत्कृस्ट खेलाडी चुनिएका न्युजिल्यान्ड कप्तान केन विलियमसनले सेमीफाइनलमा भारतसंगको महत्वपूर्ण इनिंग पछि करीयरकै उच्च ७९९ अंक प्राप्त गरेका थिए। इंग्ल्याण्ड अल-राउण्डर बेन स्टोक्स ६९४ अंक सहित प्रतियोगिता अन्त्य गरेका छन् र उत्कृस्ट २० भित्र परेका छन्। अस्ट्रेलियासंग ८५ रन बनाएका जेसन रोय वरियतामा उत्कृस्ट १० भित्र पहिलो पटक उक्लेका छन्।
बिराट कोहली ८८६ अंक सहित ब्याटिंग वरियतामा पहिलो स्थानमा कायमै छन् भने विश्वकपमा शतक वर्षा गरेका रोहित शर्मा ८८१ अंक सहित दोश्रो र पाकिस्तानका बबर आजम ८२७ अंक सहित तेश्रो स्थानमा रहेका छन्।
एकदिवसीय वरियतामा नेपाल १५ औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्याण्ड १४ औं र युएई १६ औं स्थानमा रहेको छ। टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा भने नेपाल ११ औं स्थानमा स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, जिम्बाबे र आयरल्याण्ड भन्दा अघि रहेको छ। एकदिवसीय वरियतामा नेपाली खेलाडीहरु उत्कृस्ट १०० भित्र छैनन्। टि-२० तर्फ बलिंगमा बसन्त रेग्मी र सोमपाल कामि ६६ औं स्थानमा रहेका छन्। टि-२० ब्याटिंगमा पारस खड्का ९३ औं स्थानमा रहेका छन्। टि-२० अल-राउण्डर तर्फ पनि पारस ३९ औं स्थानमा रहेका छन् भने सोमपाल कामि ४८ औं स्थानमा इंग्ल्याण्डका मोइन अलि र नाथन कोल्टर नाइलसंगै रहेका छन् ।